Perfume | The World of Pinkgold
Wearing Perfume (for men)
-လူတစ်ယောက်ရဲ့ အနံ့ခံအာရုံဟာ မနက်စောစောပိုင်းအိပ်ယာထချိန်မျိုးမှာ ပိုပြီးအာရုံခံ ကောင်းပါတယ်။ အ၀တ်အစားဝတ်တဲ့အချိန်မှာ ဂရုစိုက်ပြီးရေမွှေးကိုရွေးဆွတ်ပါ။ မုတ်ဆိတ် ရိတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်း မိမိအနံ့မကြိုက်တဲ့ ရေမွှေးမျိုးကို အသုံးမပြုဖို့လိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ မိမိလည်းအနံ့ ခံမရ၊ မိမိလည်းမကြိုက်တဲ့ အနံ့မျိုးကို မိမိသွား လာနေထိုင်၊လုပ်ကိုမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း ကြိုက်ပါ့မလားလို့ စဉ်းစားဖို့ကောင်းပါတယ်။
ရေချိုးခန်းတွေမှာ သုံးတဲ့ရေမွှေးမျိုးဟာ အလွန်အနံ့ပြင်းပါတယ်။ အချိန်အတန်ကြာအောင် လည်းအနံ့စွဲနေတတ်တယ်။ အဲဒီအမျိုးအစားရေမွှေးကို သုံးရင်ဘယ်လောက်သုံးမယ် ဆိုတာ စဉ်းစားပြီးသတိထားသုံးပါ။ ကြိုက်လို့သုံးရင်လည်း လက်ကောက်ဝတ်၊ လည်ပင်းနဲ့ တံတောင် ဆစ်တွေမှာ နည်းနည်းလေးပဲဆွတ်ပါ။ များများဆွတ်မယ်ဆိုရင် ခြေထောက်ကိုစပြီးဆွတ်ပါ။ ဒါမှ အနံ့ဟာ အပေါ်ကိုတက်လာပါလိမ့်မယ်။
-ရေမွှေးကို များများဆွတ်မိလို့ စိတ်ညစ်မသွားပါနဲ့။ ရေမွှေးမှာ သွေ့ခြောက်မြန်စေတဲ့ အရက် ပြန်ပါပါတယ်။ဒါကြောင့် နာရီပိုင်းအတွင်း ခြောက်သွားပြီး အနံ့စူးရှလွန်းတာလည်း ဖျော့ သွားပါလိမ့်မယ်။
တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးအတွက်ရော၊ အမျိုးသမီးတွေ ကျေနပ်နှစ်ခြိုက်ဖို့အတွက်ရော၊ မိမိရဲ့ကိုယ်စိတ်နှလုံး ကြည်လင်လန်းဆန်းနေဖို့ အတွက်ရော မွှေးကြိုင်နေရပါမယ်။ အမွှေးနံ့ ဟာ စိတ်ကို လန်းဆန်းတက်ကြွစေတာလည်း အမှန်ပါပဲ။
အဲဒီလို အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ စူးရှလွန်းတဲ့ရေမွှေးမျိုး အထူးသဖြင့် ကတိုးဆီကို အလွန်အကဲ သုံးထားတဲ့ အမွှေးနံ့မျိုးကိုမသုံးကြဘဲ ခေတ်နဲ့အညီ လူကြိုက်များတဲ့ သင်းပျံ့တဲ့အမွှေးနံ့ မျိုးကိုသာ အသုံးပြုသင့်တယ်။
Posted on September 13, 2007 by cuttiepinkgold
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း များစွားကတည်းက ရေမွှေးတွေကို တစ်ခြားသောလူတွေ သတ္တ၀ါတွေကို သွေးဆောင် သိမ်းသွင်းဖို့ အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ။် ၁၈ ရာစုလောက်တုန်းက ဘုရင်ဂျော့ III က ပြည့်တန်ဆာမတွေဟာ အမျိုးသားတွေကို သွေးဆောင် ဖြားယောင်းဖို့ အတွက်ရေမွှေးတွေကို သုံးကြတယ်ဆိုတာ သိသွားပြီး ရေမွှေးဟာ မှော်ပညာတစ်မျိုး ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ရေမွှေးတွေကို အကြီးအကျယ် ပိတ်ပင်တားဆီးခဲ့ ပါသေးတယ။် သို့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ရေမွှေးထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေက ရေမွှေးဟာမှော်ပညာနဲ့လုပ်ထားတာ မဟုတ်ကြောင်း သိပ္ပံနည်းကျ လက်တွေ့ ပြသခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ ရေမွှေးထုတ်လုပ်မှုဟာ ပြန်လည်ကျယ်ပြန့် လာခဲ့ပါတယ်။
ရေမွှေးတွေဟာ တစ်ကယ်ပဲ ချစ်ရေးချစ်ရာနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုတာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ ကြော်ငြာတွေများလားဆိုတာ အရင်တုန်းကသံသယ ဖြစ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ကျွန်မတို့တွေ အနံ့တစ်ခုကို ရှုရှိုက်လိုက်တဲ့အခါ ထိုရနံ့ဟာ နာဗ့်ကြောလေးတွေကနေတစ်ဆင့် ဦးနှောက်ထဲမှာရှိတဲ့ Limbic System ဆီသို့ သတင်း အချက်အလက်ပေါင်း မြောက်များစွာကို ပို့ဆောင်ပေးပါ တယ။် Old Brain လို့ခေါ်တဲ့ ၄င်း System ဟာအလိုအလျောက် ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ လိင်ခံစားမှုတွေနဲ့ ရန်လိုမှုတွေကို ကြိုမြင်နေတတ်ပါတယ်။ စံပယ်ပန်းရနံ့ နှင့် ဗယ်နီလာ (vanilla) တို့ ဟာ လိင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်ပေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့တွေဒီလိုစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ရနံ့တွေကို ကြိုက်နှစ်သက်မှုဟာ ချွေးကနေတစ်ဆင့်ဖြတ်သန်းသွားတဲ့ pheromone လို့ခေါ်တဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့အနံ့မော်လီကျူးလီးတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ Pherin ဆိုတာဂရိဘာသာစကားဖြစ်ပြီး သယ်ဆောင်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။Hormone ကတော့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီး sexual communication မှာသူက အဓိကတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
သဘာဝအားဖြင့်တော့ လူတွေရဲ့ချွေးမှာရှိတဲ့ acidic nature မတူညီတာကြောင့် pheromones အားလုံးဟာ မတူညီကြပါဘူး။ အမျိုးသားတွေရဲ့ ၄င်းအနံ့ မော်လီကျူးလေးတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေထက်စာရင် ကတိုးနံ့ ပိုပြီးပါဝင်ပါတယ။် ကတိုးနံ့နဲ့ စန္ဒကူးနံ့ တွေဟာ အမျိုးသမီးတွေကို ချစ်ရေးချစ်ရာနဲ့ပတ်သက်လာရင် ပိုပြီးတော့ ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ။် ရေမွှေး ထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေဟာ ရှားပါးတဲ့ တိရိတ္ဆာန်တွေဖြစ်တဲ့ ကြောင်ကတိုး၊ ကတိုးနဲ့ ဦးခေါင်းကနေ ဖယောင်းပါတဲ့ ဆီတစ်မျိုး ထုတ်ယူလို့ရတဲ့ ဝေလငါးတွေကို ရှာဖွေကြပါတယ။ အဲဒီကနေရတဲ့ အနံ့တွေဟာ လူတွေရဲ့ ရာဂ ခံစားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်တဲ့။ Exotic and romantic Perfume တွေကို စန္ဒကူး၊ စံပယ် နဲ့ ylang-ylang ခေါ်တဲ့အပင်ငယ်လေးတို့ ကနေဖန်တီးယူထားတာပါ။ အီဂျစ်၊ ဂရိနဲ့ရောမက လူတွေဟာ နတ်ဘုရားတွေကို ပူဇော်ပသဖို့ တင်မဟုတ်ပဲ ထိုသို့ ဆွဲဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ရေမွှေးအမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်ကြပါတယ်။ အခုဆိုရင် ကျွန်မတို့ တွေဟာရေမွှေးတွေကို တော်တော်လေးကို နှစ်သက်နေတတ်ကြပါပြီ။ ပြီးတော့လည်း ကျွန်မတို့ တွေဟာ အဲသလို ရေမွှေးဆီတွေနဲ့ကိုယ်တိုင်တောင် ရေမွှေးတွေ လုပ်လို့ ရပါသတဲ့။
ကဲ စိတ်ဝင်စားရင်တော့ ကတိုးကောင်တွေ ဝေလငါးတွေ စန္ဒကူးတွေရှာပြီး ရေမွှေးလေး ဖော်စပ်ကြပေါ့နော။
Mind-set of perfume users (men)
ကဲ ဟောဒါက အမျိုးသားတွေ အတွက်ပါရှင်။
လီမွန်ရနံ့သင်းသင်းလေးတွေနဲ့ spicy ဖြစ်တဲ့ရနံ့မျိုးကို ကြိုက်နှစ်သက်တတ်တဲ့ သူမျိုးတွေကတော့ အကောင်းမြင်ဝါဒ သမားတွေပေါ့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည် ကြံရည်ဖန်ရည်ရှိပြီး တာဝန်တွေကိုလည်း မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲပြီးအောင် လုပ်တတ်ပါတယ် ပြသနာတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ သူမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ် သူဟာ အပြောင်အလဲတွေ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်း နှစ်သက်တတ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်
အရှေ့တိုင်းဆန်တဲ့ ရနံ့မျိုးကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အမျိုးသားတွေကတော့ တစ်ကိုယ်တည်းနေထိုင်မှုကို သဘောကျသူမျိုးဖြစ်ကြပါတယ် သူများတွေကို အားကိုးလိုစိတ်နည်းပါးပါတယ် သူရဲ့စိတ်ကတော့ တစ်ခါတစ်လေမှာ နုညံ့ပြီး ခံစားမှုလွယ်တတ်ပါတယ် အပေါ်ယံဆက်ဆံရေးတွေကို သိပ်ပြီးသဘောတွေ့ တတ်တဲ့သူမျိုး မဟုတ်ပါဘူး လေးလေးနက်နက်မထားပဲပြောင်းလဲလွယ်တဲ့ သူမျိုးကိုလည်း သူကမကြိုက်တတ်ပါဘူးတဲ့
ရနံ့ အေးအေးလေးတွေ ပေါ့ပါးတဲ့ရနံ့ မျိုးလေးတွေကြိုက်တတ်တဲ့သူမျိုးကတော့ အမြဲတမ်းပဲ လန်းဆန်းတက်ကြွနေတတ်ပြီး အနုပညာဆန်တဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းလေးတွေရှိနေတတ်ပါတယ် ဂီတကိုလည်း စိတ်ဝင်စားပြီး ခေတ်ဆန်မှုကိုသဘောကျတတ်ပါသတဲ့ ငြီးငွေ့ ဖွယ်ကောင်းတဲ့နေ့ စဉ်ဘ၀ကို အမြဲတမ်းပဲ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာဖြစ်အောင်လည်း ဖန်တီးနေထိုင်ပါသတဲ့ ဖက်ရှင်ကျကျနေထိုင်ရတာကို သဘောတွေ့ ပြီး သူ့ ကိုယ်သူလည်း ထင်ထင်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးတတ်ပါတယ်
စူးရှပြီးအီတဲ့မွှေးရနံ့ ကိုကြိုက်တဲ့ အမျိုသားတွေကတော့ သူတို့ ကိုယ်သူတို့ သပ်ရပ်သန့် ရှင်အောင်နေတတ်ကြပြီး ယောင်္ကျားပီသတဲ့ ရုပ်သွင်ရှိကြတဲ့သူမျိုးပါ သူဟာအောင်မြင်တဲ့ဘ၀မှာနေထိုင်လိုသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ် အောင်မြင်လာအောင်လည်း ကြိုးပမ်းတတ်တဲ့သဘာဝရှိသူမျိုးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်
အီပေမဲ့ အေးမြတဲ့ရနံ့ မျိုးကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေကတော့ လွတ်လပ်မှုကိုသဘောကျပြီး သမရိုးကျလမ်းစဉ်တွေ ကနေခွဲထွက်တတ်သူပါ ဘ၀ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုလည်း ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းနဲ့ ဖြေရှင်နိုင်သူပေါ့ သူရဲ့အပြုအမူတွေဟာလည်း အေးစက်စက်နဲ့တည်ငြိမ်နေတတ်ပါတယ်
Perfume…. The fragrance we love!
ကျွန်မ ဘလောဂ့်မရေးတာလဲ တော်တော်လေး ကြာသွားပြီရှင့်။ ပြီးခဲ့တဲ့လက 37 ပိုစ့်လောက် တင်ခဲ့တာကိုမှ မထောက် ငြိမ်ချက်သား ကောင်းနေလိုက်တာလို့ အပြစ်တင်လိုကလည်း တင်ကြပါတော့။ ကျွန်မကလည်း ကိုယ့်အခက်အခဲနဲ့ကိုယ်ရှင့်။ ရုံးက တင်းကျပ်လွန်းတဲ့ IT Rules တွေရယ်၊ အခုတလော တော်တော် အလုပ်များတာရယ်ကြောင့် ပိုစ့်တွေ မရေးဖြစ်တာပါ။ ခုတော့ အချိန်လေးအားတုန်း၊ အင်တာနက်လေး သုံးခွင့်ရတုန်း ပိုစ့်လေး တစ်ခုလောက်တော့ တင်မယ် စိတ်ကူးမိပါတယ်ရှင်။ တစ်ကယ်တော့ ဆားချက်တာပါ။ အရင်ပလန်းနက်မှာ ဖိုရမ်ရေးတုန်းက ရေးသားခဲ့ဖူးတဲ့ ရေမွှေးတွေအကြောင်းကို Blog ဖတ်သူ များအတွက် ပြန်လည်ဝေငှပေးချင်ပါတယ်။ သမိုင်းကြောင်းလေးနဲ့ အရင်စလိုက်မယ်နော်။
ရေမွှေးလို့ ခေါ်တဲ့ အမွှေးနံသာတွေကို အီဂျစ်လူမျိုးတွေက သူတို့ တွေရဲ့နတ်ဘုရားတွေကို ပူဇော်ပသတဲ့နေရာမှာ စတင်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ ဆိုစမှတ်ပြုကြပါတယ် နောက်တော့မှ လူတွေက အမွှေးနံသာအဖြစ်ရော ဆေးအဖြစ်ပါအသုံးပြုလာကြပါတယ် ရေမွှေးသုံးစွဲမှုဟာ ၁၇ ရာစုလောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ အရမ်းကို ကျယ်ပြန့် လာခဲ့ပါတယ် ပြင်သစ်နိုင်ငံဟာကမ်ဘာမှာ အကြီးကျယ်ဆုံး ရေမွှေးထုတ်လုပ်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ရေမွှေးရဲ့ အဓိက raw material တွေကို သစ်ပင်နဲ့တိရိတ္ဆန်တို့ ကနေ ကရတယ်လို့ ပြောကြပါတယ် ၁၈၀၀ ပြည့်နှစ်လောက်မှာ ပထမဆုံး synthetic product ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ရေမွှေးထုတ်လုပ်တဲ့ ဖော်မြူလာတွေကိုလည်း လျှို့ ဝှက်စွာ ထိန်းသိမ်းထားကြရပါတယ်
Three Kinds of Fragrance Notes
ကျွန်မတို့ တွေ ရေမွှေပုလင်းကို စစချင်းဖွင့်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ထွက်လာတဲ့ အနံ့ ဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်မတို့ ရဲ့ ကိုယ်ပေါ်မှာ ဆွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ထွက်လာတဲ့ အနံ့ ဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်မတို့ တွေထွက်သွားပြီး ကျန်ခဲ့တဲ့ရေမွှေနံ့  ဖြစ်ပါတယ်
ရေမွှေးတွေကို အမျိုးအစားအားဖြင့် EDP EDC and EDT ဆိုပြီးသုံးမျိုးခွဲထားပါတယ်
EDP ( Eau De Perfume)
EDP ဆိုတာကတော့ ရေမွှေးဆီ အများဆုံးပါဝင် သောအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ် သာမန်အားဖြင့်ပြင်းပြတဲ့ အနံ့ ဖြစ်ပါတယ်
EDT ဆိုတာရေမွှေးဆီနဲ့တစ်ခြား Chemical တွေကိုသမအောင် အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ် သင်းပျံ့ပျံ့အနံ့ လေးရှိပါတယ်
EDC ( Eau De Cologne)
EDC ဆိုတာ ရေမွှေးဆီကို အနံ့ ရရုံလောက်သာ အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်မတို့ ဟာ ရေမွှေးတွေကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူရာ မှာလည်း သေချာဂရုတစိုက် ၀ယ်ဖို့ လိုပါတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရေမွှေးတစ်မျိုးထဲ သုံးထားပေမဲ့ လူတစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက်ဟာ တူညီတဲ့ ရနံ့ ကို မရနိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် လူတစ်ယောက်ဘေးနားက ဖြတ်သွားလို့ ရတဲ့ ရနံ့ ကိုကြိုက်ပြီး ကံကောင်စွာနဲ့အဲဒီတံဆိပ်ကို ရှာဝယ်နိုင်ခဲ့ရင်တောင် သူဆီမှာထွက်တဲ့ အနံ့ မျိုး ကိုယ့်ဆီမှာထွက် ချင်မှ ထွက်မှာပါ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူ့ ခန္ဒာကိုယ်ကို ဖွဲ့ စည်းထားတဲ့ Body Chemistry တွေမတူညီနိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် ရေမွှေးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ပထမဆုံး ကိုယ်ပေါ်မှာအရင်ဆွတ်ပြီး တစ်မိနစ်၊ နှစ်မိနစ်လောက်ထားကြည့်ပါ ပြီးမှထွက်လာတဲ့အနံ့ ဟာ ကိုယ်တစ်ကယ် ကြိုက် မကြိုက်ဆိုတာ သေချာမှဝယ်စေချင်ပါတယ်